↑ Cambridge Advanced Learner's Dictionary, Third Edition. Cambridge University Press; 2008. ISBN 9780521858045.
↑ BBC Earth - Forest fire videos - See how fire started on Earth။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တောမီး&oldid=623753" မှ ရယူရန်
၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၅:၃၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၅:၃၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။